Tartan Kubadda Cagta ah oo loo soo Gabagabeeyey Xaafadaha ku yaalla magaalada Boosaaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Tartan Kubadda Cagta ah oo loo soo Gabagabeeyey Xaafadaha ku yaalla magaalada Boosaaso[Sawirro]
BOOSAASO – Tartankan kubadda cagta ah ayaa loo qabtay 16-ka xaafadood ee magaalada Boosaaso,waxaana soo qaban qaabiyey Hay’adda Ciidanka xoogga Puntland ee PSF.
Munaasabada lagu soo xirayey tartankan ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka degmada Boosaaso,maamulka gobolka Bari,xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo Puntland,saraakiisha PSF iyo shacabka magaalada.
Cayaartii ugu dambeysay ayaa waxaa isugu yimid kooxaha Raxiis iyo Hormuud taasoo cayaartu ahayd mid aad u xiisa badneyn ayey guushu ku raacday kooxda Hormuud ee ka dhisan xaafadaha Barakacayaasha oo gool ku laad koobka ku qaaday.
Guddoomiye kuxigeenka Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdillaahi Sheekh Nuur ayaa si weyn usoo dhaweeyey uguna hambalyeeyey kooxda koobka ku guuleysatay,isagoona sheegay in arrin lagu faano iney tahay in koobka ay ku guuleystaan dhalinyaro degan xaafadaha barakacayaasha magaalada.
Duqa degmada Boosaaso Eng Yaasiin Mire Maxamuud ayaa soo dhaweeyey sida wanaagsan uu usoo gabagaboobay koobkan,wuxuuna ugu baaqay dhalinyarada iney ka shaqeeyaan amniga magaalada,wuxuuna sheegay in koobkan uu qeyb weyn ka qaadanayo Isdhexgalka bulshada.
Guddoomiye kuxigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdillaahi Ciro ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhalinyaradu noqdaan kuwa sugga amniga ,cayaaruhuna yihiin kuwa ka qeyb qaata nabadgelyada.
Nabadoon Cabdicasiis Baydhabo oo ku hadlayey afka Hay’adda Nabadsuggida Puntland ee PSF ayaa madasha uga hadlay muhiimada uu leeyahay tartankan,wuxuuna sheegay iney sii-wadayaan tartamadan oo kale oo ay maalgelinayso Hay’adda PSF.
Ugu dambeyntii ,waxaa abaalmarino iyo koob la gudoonsiiyey kooxda Hormuud oo qaaday koobka Isdhexgalka bulshada ee 16ka xaafadood ee magaalada Boosaaso.